Somaliland oo si dadban u qiratay in hawadooda Muqdisho laga maamulo | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Somaliland oo si dadban u qiratay in hawadooda Muqdisho laga maamulo
Somaliland oo si dadban u qiratay in hawadooda Muqdisho laga maamulo
(Hargaysa) 21 Maarso 2020 – Cabdi Maxamed Rodol oo ah Maareeyaha Guud ee Hay’adda Duulista Hawada iyo Garoomada Somaliland ayaa markii ugu horreeysey ka hadlay xanibaadda ay hawada Somalia kusoo rogtey DF Somalia.
Md Rodol ayaa sheegay in ”hawada iyo garoomada Somaliland ay xukunto Somaliland oo qura”, isagoo sheegay in ay kaliya ka maqan yihiin dalal uu sheegay inay iyagu horay u mamnuuceen.
”Hawada Somaliland waxaa u xor ah Somaliland, cid kale oo ay la wadaagtaana ma jirto,” ayuu yiri Maareeye Rodol.
Md Rodol ayaa si dadban u qiray inay DF Somalia iyadu ka taliso hawada Somalia oo idil, isagoo hadal yara sogordahan arrintaa ku caddeeyay.
”Waxaa jira wax caalami ah oo nagu xiraya Somalia, taasoo ay u muuqato inay Muqdisho isku dayeeyso inay khal khal geliso,” ayuu daba dhigay, isagoo caalamka u sheegay inaysan Somalia shuqul ku lahayn hawada Somaliland, sida uu yiri isagoo aan faahfaahin waxa ay yihiin waxa Somalia ku xiraya.
Maareeyaha oo diidey inuu ka jawaabo su’aalaha saxaafadda ayaa sheegay inay hawadu furan tahay, isagoo aan ka hadlin sida ay taasi u waafaqayso faafiftaanka cudurka corona.
DF Somalia ayaa maanta dib u fasaxday duullimaadyada caalamiga ah, taasoo keentay inay maanta Hargaysa ka degto dayuuradda EA oo aan halkaa tegin labadii maalmood ee tegey, waxaana warka Maareeyaha la ogaan doonaa laba maalmood kaddib haddii ay mar kale hakadaan dayuuradaha caalamiga ah ee Somaliland taga iyo in kale.
Previous article4 qodob oo muujinaya inay XF aad ugu deg degtey dib u furista HAWADA (Sabab?)
Next articlePaolo Maldini & wiilkiisa, Paolo Dybala & laacibiin caan ah oo laga helay cudurka corona (Talyaaniga oo maydkii loo dhiibayo millateriga)